တရုတ်လက်လီ ဈေးလျှော့ ရောင်းချသူများအပေါ် ဆိုင်ရှင်က ခါးပတ် ပတ်ကာ အတုပြုလုပ်ရောင်းချမှုကြောင့် တရားစွဲခံရ – Pandaily
Vipshop said it guarantees the Gucci belts sold on its platform is 100% authentic. (Source: National Business Daily)
တရုတ်လက်လီ ဈေးလျှော့ ရောင်းချသူများအပေါ် ဆိုင်ရှင်က ခါးပတ် ပတ်ကာ အတုပြုလုပ်ရောင်းချမှုကြောင့် တရားစွဲခံရ
Apr 09, 2021, 19:35ညနေ 2021/04/09 20:01:21 Kelsey Cheng
တရုတ်အွန်လိုင်းဈေးလျှော့ လက်လီရောင်းချသူများဟာ အစိုးရထောက်ပံ့မယ့် လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ ထောက်ခံချက် အထောက်အထားတွေကို တင်ပြရမှာဖြစ်ပြီး သည်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာ ထုချေလွှာအတုပြုလုပ်ရောင်းချတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကြေညာချက်ထုတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၎တို႔အေနျဖင့္ မတ္လတြင္ စားသံုးသူမ်ားအား တိုင္ၾကားမႈမ်ားရွိလာၿပီးေနာက္ Goods Goods မ်ားကို ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ဝယ္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး ခါးပတ္အတုမ်ားကို ျပန္လည္ေရာင္းခ်မည့္ De House ကုမၸဏီအတြက္ တံဆိပ္ကပ္ရန္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိလာသည္။ ဒီခါးပတ္ ေစ်းႏႈန္းဟာ မူလက ၃၃၀၀ ယြမ္ (၅၀၃ ေဒၚလာ) ေစ်းေလွ်ာ့ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၅၄၉ ယြမ္ ေစ်းေပါက္ခဲ့ပါတယ္။
Giangi Belt ကားဝယ္ယူ သူမ်ားထဲတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အသိမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရ ကားျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕မွ ဂြမ္ေဒါင္က သတင္းရရွိ သည္။ (Source: ဝေသာလီ ဆောင်းပါးရှင်)
Wang Wai Wai သည် တရုတ်မီဒီယာများပေါ်တွင် Outle The Star News သူကလည်း သူလိုချင်တဲ့ခါးပတ်ကို ဖြတ်ပြီးရောင်းပေးရင် သူ့ခန္ဓာကိုယ်က De Wuရဲ့ခါးပတ်ကို သူကိုယ်တိုင်ရှာတွေ့တဲ့အတွက် သူ့ကိုယ်သူ မသင့်တော်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ သည်ပလက်ဖောင်းဟာ တင်းကျပ်တဲ့ အသိမှတ်ပြုလုပ်ငန်းစဉ်တွေလုပ်ဆောင်နေပြီး တရုတ်စားသုံးသူတွေကြားမှာ ရေပန်းစားလာနေပြီး ပလက်ဖောင်းတွေကနေတစ်ဆင့် စစ်စစ်ကို ဝယ်ယူကြတာဖြစ်ပါတယ်။
သို႔ေသာ္ Wang မွာ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားစြာ ေတြ႕ရွိခဲ့ရျပီး De Wu ကို Gucci ခါးပတ္အတုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ သူ့ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့ အခါမှာတော့ ဝေယံက သူ့ကို စိတ်ချရအောင် လုပ်ပေးမယ်၊ ကုန်စည်က ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း စစ်စစ်စစ်နဲ့ သူ့ကို ငွေပြန်အမ်းပေးဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ The Red Star သတင္းဌာနရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္အရ Gucci ခါးပတ္ကို ဝယ္ယူမယ့္ ကုန္ပစၥည္းေတြထဲက စုစုေပါင္း ၁၃၃ စင္းကို De Wuk အတုအျဖစ္ တံဆိပ္ကပ္ခဲ့ပါတယ္။
“ ယေဘုယျအားဖြင့် Third Party platform မှာ အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်မပါရှိဘဲ အရည်အချင်းနှင့် ထောက်ခံချက် လက်မှတ်မပါရှိဘဲ မိမိတို့၏ သတင်းပေးပို့ချက်ကို အသိအမှတ် မပြုသော တံဆိပ်ဖြစ်ပါက မည်သည့် ဥပဒေမျှ သက်ရောက်မှု မရှိပါ” ဟု Weibo အကောင့်တွင် ကြာသပတေးနေ့က ထုတ်ပြန်သော ၎င်းတို့၏ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ချက်၌ ဖော်ပြထားသည်။
ကုမ္ပဏီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်က The Star သတင်းဌာနကို ပြောကြားရာမှာ “ဒီခါးပတ်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Brand တွေကို ပြည်ပကနေ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူပြီး ရောင်းချသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ အမှန်ပါပဲ” လို့ အာမခံပါတယ်။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ Wei ကုိ ခ်က္ခ်င္းအေရးယူေပးရန္ တုိင္ၾကားစာေပးပုိ႔ထားၿပီး Gucci ကုိ ခါးပတ္မပတ္သည့္ ပစၥည္း ၁၁ မ်ဳိးကုိ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ အေရးယူသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ တရုတ်စိစစ်ရေးစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ကွမ်တုံရုံးမှာထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာတစ်ရပ်မှာ ဒီခါးပတ်ဟာ အမှတ်တံဆိပ်စံနှုန်းတွေနဲ့ကိုက်ညီတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
“ ကျွန်တော်တို့ဟာ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို အစစ်အမှန် ရောင်းချနေပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စားသုံးသူတွေအတွက် စျေးဝယ်အတွေ့အကြုံတွေ ရရှိဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ သဘောတူထားပြီးသားပါ၊ ကျွန်တော်တို့ကတော့ သူတို့ကို ငွေပြန်အမ်းပေးတာကို ကြိုဆိုပါတယ်. သူတို့ကိုလည်း ဒီပစ္စည်းတွေကို ယူဆောင်ပြီး နောက်ထပ်စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ဖို့ စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်” လို့ သည်ကုမဏီရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
သို႔ေသာ္ Ku Chi ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ဦးကမူ တ႐ုတ္မီဒီယာမ်ားသည္ Red Star News ကို တရား၀င္ခြင့္ျပဳသည့္ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခု မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဝေသာလီကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် အွန်လိုင်းဈေးလျှော့ ဆိုင်များ ရှိလာကြောင်း၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ဝယ်ယူသူ ၈၃.၉ သန်းအထိ ရှိလာကြောင်း သိရသည်။ ယခုစာရင္း၀င္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Tencent သည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အသားတင္၀င္ေငြ ၉.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ၿပီး ယြမ္ ၁၀၁၉ သန္း (စုစုေပါင္း ၁၅၆ သန္း) ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ေစ်းကြက္ႀကီးၾကပ္မႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႕က စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ယင္းပလက္ေဖာင္းသည္ မေလ်ာ္မကန္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီက ယြမ္ ၃ သန္း (၄၆.၄ သန္း) ဒဏ္႐ိုက္ခဲ့သည္။
Topics: မြင်ကွင်းမဖြယ္မရာယွဥ္ၿပိဳင္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြ သိန္း ၃၀၀ ေဆာင္ရမည္
National Market Regulatory Generals က ကုန္ပစၥည္းေတြကို “Check System” ဆိုတဲ့ အမွတ္တံဆိပ္နဲ႔ တူညီတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ရယူႏိုင္ဖို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ Electro Platform ေပၚမွာ စာရင္းျပဳစုေနပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ ယင္းစနစ္ကို အသံုးျပဳကာ စားသံုးသူမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈကို ထိခိုက္ေစျခင္း၊ ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ စာမ်က္ႏွာမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔ျခင္းႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ ရပ္ဆိုင္းျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
ကုမ္ပဏီရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ အရေးယူမှုတွေကို လက်ခံပြီး ပြုပြင်မွမ်းမံမှုတွေ လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းဈေးကွက်နဲ့ စားသုံးသူ အကျိုးစီးပွား ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှု အလေ့အထတွေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Tags ∗Bytedance | ∗Didi Chuxing | ∗Luckin Coffee | ∗Tencent | ∗xiaohongshu | 996.ICU | aerospace | Alibaba | automotive industry | Autonomous Driving | Beijing Winter Olympics | Blockchain | bribery | Bytedance | CES | China | China VC Weekly | Coffee Chain | commercial rocket | Counterfeit product | delivery service | dewu | Digital Currency | Douyin | E-cigarettes | E-Commerce | e-yuan | electric vehicle | financing | fintech | Food | freshippo | Haidilao | Hot Pot | internet community | Internet company | Investment | LIDAR | market regulation | massive layoff | mobile internet | Music | Online Education | overseas markets | regulation | retail coffee chain | ride-hailing platform | Robot | social media | Social network | technology | Tobacco | vipshop | Winter sports | Xiaomi∗ | XPeng Motors
Oppo Mobile World Conference တွင် Flash Top Up Project စတင်မည်
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္က ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ Mobile World Congress (MWCS) ၏ ဦးေဆာင္စမတ္ဖုန္းကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Oppo Initiative Program -flash Initiative ကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။
တ႐ုတ္တြင္ “အသံဖိုင္ Chat Room ” အက္ပလီေကးရွင္းကို ပိတ္ပင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္လာေသာ “အိမ္တြင္းျဖစ္စဥ္”
ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်နောက်ပိုင်းမှာ တားမြစ်ကန့်သတ်ထားတဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာအပလီကေးရှင်းကို Clubhouse က ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီးနောက် သည်ထုတ်ကုန်နှစ်ခုဟာ လုံးဝတီထွင်ထုတ်လုပ်ထားပြီး ပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွင်း တိုးဝှေ့ဝင်ရောက်နေတဲ့ ဒီအက်ပ်ကို အစားထိုးခဲ့ပါတယ်။
Industry Feb 24 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 25, 2021